त्रिवि टिचिङलाई कलेजो प्रत्यारोपणमा दोस्रो सफलता, लिने नै भयो त सुस्ताएको प्रत्यारोपणले गति ? – Health Post Nepal
त्रिवि टिचिङलाई कलेजो प्रत्यारोपणमा दोस्रो सफलता, लिने नै भयो त सुस्ताएको प्रत्यारोपणले गति ?
२०७६ साउन ३ गते १८:३८
महाराजगन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले कलेजो प्रत्यारोपणमा दोस्रो सफलता हासिल गरेको छ । अस्पतालले शुक्रबार सफल प्रत्यारोपण गरेको हो । टिचिङको दोस्रो प्रत्यारोपणसँगै नेपालमा हालसम्म कलेजो प्रत्यारोपणको संख्या ४ पुगेको छ ।
यसअघि अस्पतालले करिब डेढ महिनाअघि १७ जेठमा ५८ वर्षीय पुरुषमा कलेजोको पहिलो सफल प्रत्यारोपण गरेको थियो । त्यतिवेला प्रत्यारोपणको ३ सातापछि बिरामीलाई स्वस्थ अवस्थामा डिस्चार्ज गरिएसँगै प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी निकै उत्साहित भएका थिए ।
अंगप्रत्यारोपण सर्जन डा. रमेश भण्डारी नेतृत्वको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले शुक्रबार दोस्रो सफलता हात पारेको हो । चिकित्साविज्ञानमा जटिलतम मानिने कलेजो प्रत्यारोपणमा यसपटक डा. भण्डारी नेतृत्वको टोलीलाई भारतको नयाँदिल्लीस्थित फोर्टिस हस्पिटलका वरिष्ठ सर्जन विवेक बिजले मार्गदर्शन गरेका थिए । शुक्रबार प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीको नाम गोप्य राखिए पनि उनको उमेर ४४ वर्ष भएको उपचार टोलीको नेतृत्वकर्ता डा. भण्डारीले जानकारी दिए ।
अंगप्रत्यारोपण सर्जन डा. रमेश भण्डारी नेतृत्वको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले शुक्रबार दोस्रो सफलता हात पारेको हो । चिकित्साविज्ञानमा जटिलतम मानिने कलेजो प्रत्यारोपणमा यसपटक डा. भण्डारी नेतृत्वको टोलीलाई भारतको नयाँदिल्लीस्थित फोर्टिस हस्पिटलका वरिष्ठ सर्जन विवेक बिजले मार्गदर्शन गरेका थिए । शुक्रबार प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीको नाम गोप्य राखिए पनि उनको उमेर ४४ वर्ष भएको उपचार टोलीको नेतृत्वकर्ता डा. भण्डारीले जानकारी दिए । यसअघिको पहिलो प्रत्यारोपणमा भारतकै एपोलो अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले सघाएका थिए ।
नेपालमा हालसम्म सरकारी र निजी गरी जम्मा ४ वटा अस्पतालले कलेजो प्रत्यारोपणको अनुमति पाएका छन्, जसमध्ये २ वटाले मात्र प्रत्यारोपण गराएका छन् । सरकारीस्तरमा भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले दुई बिरामीमा कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गराएको थियो । यद्यपि, अस्पतालले यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । त्रिवि शिक्षणले भने अनुमति पाएको झन्डै पाँच महिनाको तयारीपछि प्रत्योरोपण सुरु गरेकोमा डेढ महिनाको बीचमा दोस्रो सफलता हात पारेको हो । यससँगै त्रिवि शिक्षणले भने प्रत्यारोपणलाई निरन्तरता दिएर प्रत्यारोपणको सुस्ततालाई केही गति दिने विश्वास पलाएको छ ।
नेपालमा विदेशको तुलनामा एकतिहाइभन्दा पनि कम खर्चमा कलेजो प्रत्यारोपण हुने गरेको छ । विदेशमा प्रत्यारोपण गर्दा ७० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेकोमा नेपालमा २० देखि २५ लाखमै प्रत्यारोपण हुन्छ । तर, प्रत्यारोपण अत्यन्त जटिल भएका कारण त्यसका लागि अत्यन्त सम्पन्न पूर्वाधारको आवश्यकताका साथसाथै कानुनी व्यवधान र दातासित बिरामीको अंगको मेल खानुपर्ने हुँदा प्रत्यारोपणले गति लिन नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय त्रिवि टिचिङको सक्रियता बढेसँगै नेपाली बिरामीले सस्तो मूल्यमा स्वदेशमै गुणस्तरीय सेवा पाउने आशा पलाएको छ ।
यसबाहेक मोफसलका दुई निजी अस्पतालले पनि कलेजो प्रत्यारोपणको अनुमति पाइसकेका छन् । दुवै अस्पताल चितवनका हुन् । यद्यपि, उनीहरूले हालसम्म प्रत्यारोपण सुरु गरेका छैनन् । चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले केही महिनाअघि कलेजो प्रत्यारोपणको अनुमति पाएका थिए ।